Dib u eeg Acer Revo One RL85, PC mini ah oo yar "mini" | War gadget
Paul Aparicio | | Kumbuyuutarro, Reviews
Maanta waxaa jira noocyo badan oo kombuyuutarro ah, taasi sir ma aha. Dhibaatadu waxay tahay inay jiraan kombuyuutarro qaarkood oo loo malaynayo inay summad wanaagsan yihiin oo aan sii jiri doonin inta aan jeclaan lahayn. Dhibaatadan shaqsiyan kuma qabin mid ka mid ah laptop-yada Acer in aan lahaa. Xilligan waxaan kaaga soo qorayaa barnaamijka 'Aspire One D250' oo durba sannadihiisii ​​ku jira wax cabasho ahna aan qabin. Taasi waa sababta tan dib u eegis Waxaan ku bilaabay xoogaa shuruud ah waayo-aragnimadaydii wanaagsanayd ee Acer.
Taasi waxay tiri, haddii aad isticmaaleyaal aad u baahan, shaki la'aan, waxa ugu fiican waa kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo iska iloobi laptops. Laptops-ku waa hagaagsan yihiin, laakiin way ka qaalisan yihiin oo ka xaddidan yihiin kombuyuutarrada "munaarad". Haddii aadan rabin munaarad weyn, waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad iibsato Mini PC, oo isku mid ah laakiin leh qalab aad u hooseeya oo ku yaal meel yar. PC (weyn) Mini PC waa Acer - Revo One RL85, kumbuyuutar leh awood aad u sareysa oo adag oo noo oggolaan doonta inaan keydinno wax kasta oo aan qiyaaseyno oo, ugu fiican dhammaan, waxaan ka heli karnaa xogteenna meel kasta oo adduunka ah.
1 Waxyaalaha sanduuqa ku jira
3 Sooc Acer Revo One RL85
5 Ku daray
5.1 Kiiboodhka / Xakamaynta
5.2 Codsiyada Acer
Acer Revo Hal RL85.
Kiiboodhka / xakamaynta.
Sida aad ku arki karto sawirada, Acer ma rabin inuu sameeyo munaarad u eg kumbuyuutar. Markii aad aragtay RL85 waxay umuuqataa in waxa ay rabeen ay tahay in Mini-ka PC-ga uusan u muuqan wax xun, tusaale ahaan, telefishanka agtiisa. Qaababkeeda wareegsan iyo xajmigiisuba waxay ina xusuusinayaan qaar ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo ee aan dhigno miis kasta, sidaa darteed waxaan hubin karnaa in RL85 aysan soo jiidan doonin dareen diidmo ah meel kasta oo aan dhigno.
Sooc Acer Revo One RL85
Windows 8.1 x64 (waa la cusboonaysiin karaa)
8GB, DDR3L SDRAM
3 TB HDD (uguyaraan noocaan)
HDMI, Mini DisplayPort, 3,5mm jaakad
2 USB 2.0, 2 USB 3.0, aqriyaha kaarka SD (korka)
Waxqabadka RL85 wuxuu ila muuqdaa mid aad iigu wanaagsan. Waa runtaa caawimada aad rakibtay Windows 10 laakiin ma dhihi karno kombiyuutarkan wuxuu la yimaadaa qalab kooban. 8GB ee RAM iyo processor-ka Intel Core i3 2.10GHz oo laba-geesood ah ayaa ku filnaan doona inta badan dadka isticmaala laakiin, macquul ahaan, mini PC-ga looma maleynayo inuu yahay qalabka ugu fiican ciyaaraha fiidiyow ee ugu dambeeyay.
Waqtiga aan u adeegsaday, weligay ma dareemin in nidaamku dareemayo culeys ka baxsan dhowr bilow oo ka badan sidii aan jeclaan lahaa. Sikastaba, kani waa isticmaale inta badan adeegsada nalka nooca Ubuntu waxaana loo isticmaalaa inuu si dhaqso leh kubilaabmo.
Kiiboodhka / Xakamaynta
Acer Revo One RL85, sidaan horeyba u sheegnay, waa kombuyuutar yar. Kombiyuutarada yar-yar, sidaan horayba ugu soo sheegay waxyaabaha ku jira sanduuqa, waxay yimaadaan "qaawan" iyagoon dhinacna ka jirin. Keyboard, jiirka, iyo shaashadda waa in si gooni ah loo iibsadaa. Sikastaba xaalku ha noqdee, moodooyinka qaar ee madaxda sare a kiiboodhka cabbirka koontaroolaha (xoogaa weyn) oo leh laba dhinac: dhinac dhinac ah oo leh kumbuyuutar leh wax kasta oo aad u baahan tahay inaad qorto iyo masaafo fog oo la mid ah telefishanka haddii ay dhacdo in kombuyuutarkeennu ku xirnaado TV-ga qolkayaga aan degno oo aan u isticmaalno sanduuqa set-top. Waxay kaloo leedahay makarafoon, haddii aan rabno inaan wax ka weydiinno Cortana.
Haddii aynaan rabin inaynu isticmaalno qalabka fog-fog, waxaa sidoo kale jira codsi loo heli karo macruufka iyo Android-ka oo noo oggolaan doona xakamayso Acer Revo One meel fog. Waxyaabaha xun ee ku saabsan codsiyada waa inay shaqeeyaan oo keliya haddii aynaan cusbooneysiin nidaamka qalliinka, Revo One-kan horeyba waa la ii cusbooneysiiyay. Haddii aan raadino arjiga adeegga, oo ah midka ay tahay in lagu rakibo kumbuyuutarka, ma heli doonno. Codsigan waxaa kaliya lagu rakibay kombiyuutarada sanduuqa.
Laakiin waxa ugu fiican ayaa ah, laga yaabee, in loo isticmaalo kombiyuutarka yar sida daruur shaqsiyeed. Haddii aan galno bogga iyaga abApps Waxaan arki doonaa inay jiraan afar codsi oo la heli karo:
In kasta oo mid waliba ay leedahay sababteeda gaarka ah, midka aniga runtii aniga xiisaha ii leh waa kii ugu dambeeyay, abFiles. Tan iyo markii abFiles Waxaan ka heli karnaa wadista adag ee Acer Revo One meel kasta oo adduunka ah, illaa iyo inta aan ku xirnahay internetka, dabcan. Ma aha codsi noo ogolaanaya inaan kumbuyuutarka ka maamulno meel fog, laakiin halkii aan ka dhex raadin lahayn faylalka ku wada yaal kumbuyuutarka kumbuyuutarka. Waxa ugu fiican ayaa ah isla codsigan waxaan ka dhagaysan karnaa muusikada, daawashada cajaladaha iyo dukumiintiyada furan. Tusaale ahaan, haddii aan safar galno oo aan dooneyno inaan aragno filim aan ku keydinnay Revo One-keena, waxaan ka daawan karnaa taleefannadeenna casriga ah ama kaniiniga ah oo leh barnaamijka abFiles. Way fiicantahay, maya?
Acer Revo Hal RL85
Dib u eegida: Paul Aparicio
Aan ku habboonayn kormeerayaasha VGA
Kaliya la jaan qaadi kara kumbuyuutarrada USB-ga ama Bluetooth
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dib u eegista Acer Revo One RL85, PC mini ah oo yar "mini"
10 talooyin si aad u noqotid xiddig Instagram dhab ah